Akoonada maamulka Gobalka Banaadir oo xayiraad lagu soo ragay – Somali Top News
Akoonada maamulka Gobalka Banaadir oo xayiraad lagu soo ragay
April 28, 2019 April 28, 2019 Somali Top News	0 Comments
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Hanti Dhowrka Qaranka ayaa lagu joojiyay xisaab socotooyinka dowlada hoose ee Muqdisho, waxaana lagu war galiyay bangiyada akoonada uga furan yihiin Dowlada hoose in la joojiyay dhamaan dhaq dhaqaaqyada xisaab socotooyinka .
Hanti Dhowraha Qaranka qoraalka kasoo baxay ayaa lagu sheegay in dowlada hoose ku jirto xiligii baarista sanadlaha, waxaana la hakiyay in lacaga laga baxo akoonada dowladaha hoose ee Muqdisho.
Maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan qeybta maaliyada ayaa .la sheegay in si gaar ah uga socdaan baaritaano la xariira musuq maasuq iyo lacago la isdaba mariyay waxaana hanti dhowrka bilaabay baaritaano xaqiiqda lagu ogaanayo.
Lacago badan ayaa la sheegay in si qaldan looga bixiyay akoonada maamulka gobolka Banaadir, waxaana lacagahaasi la sheegay in sifooyin qaldan loo adeegsaday uuna maamulka ka jawaabi waayay markii la weediiyay halka ay ku baxeen.
← Maxaa ka jira in Ra’isul Wasaare Kheyre lagu badalayo Ganacsade Nucmaan Sheekh?
Garowe to hold forum to end political differences in Somalia →
Dad lagu dilay dagmada Warsheekh ee gobalka Shabeelaha Dhexe
Muxuu ahaa qorshaha dagaalyahanada Al shaabab ee weeraray Nairobi?
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir oo dib u soo celinaya suuq qadiimi ah